Soo dejisan Free CD Ripper 2.0 – Vessoft
Soo dejisan Free CD Ripper
Free CD Ripper – software ah oo loogu tala galay in la maqal iyo CD iyo files music shaqeeyaan. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay soo Siibnaa kuwan raadkaygay audio ka CD oo u badbaadin disk adag aad ee tayada digital. Free CD Ripper u saamaxaaya in ay u badalaan files audio in MP3, WAV, FLAC iyo OGG qaabab. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dirtaa codsi ka badan internet ka in database a la soo saarney a of music iyo hesho magacyada albums, fanaaniin iyo heeso ay. Sidoo kale Free CD Ripper awood u siisaa inuu ciyaaro music Halabuurka ka disk, iyadoo la isticmaalayo ciyaaryahan audio dhisay-in.
Naqil files audio ee tayo sare leh
Badalo kuwan raadkaygay audio
Kartida aad u soo dirtaa codsi in database a of files music
Free CD Ripper Software la xiriira:
Українська, Français, Español, Deutsch... Easy MP3 OGG WMA WAV Cutter 2.1
English, Français, Español, Deutsch... Pale Moon 26.1.1 Stable iyo Portable